Inkqubo yokutyela yePOS | Indawo yokuThengisa yaseLittereri
Inkqubo yokutyela yePOSUmakhi wewebhusayithi yokutyelaIbhulogiUxwebhuIxabisoUkulandaNgemaYizame ngoku
Inkqubo yokutyela yePOSUmakhi wewebhusayithi yokutyela
Khulisa indawo yakho yokutyela ngolwaneliseko
I-Waiterio yenza kube lula ukuphatha iiodolo zokutyela kunye nemivalo
Lawula iiodolo zokutya ngamanyathelo ama-4 alula
I-Waiterio idibanisa abasebenzi beendawo zokutyela ngonxibelelwano olugudileyo
Umlindi ungena kwi-odolo yabathengi kwi-app ye-Waiterio (efumaneka nasiphi na isixhobo).
Umpheki ulungiselela i-odolo evela kumshicileli oshushu okanye imbonakalo yasekhitshini.
Umpheki uphawula i-odolo njengelungele kwaye umlinda azise kwitafile yomthengi.
Umbhexeshi uprinta irisithi kwaye wamkela intlawulo ngemali okanye ikhadi.
Unokurhoxisa kwaye uphinde usebenze ukubuyisela kwakho ukubhalisa kwakhona xa ufuna ngokuthe ngqo kwi-app. Yonke idatha yakho iya kuhlala ikhuselekile.
Jonga ingeniso kwaye ufumanise ukuba zeziphi izitya ezikhulu kwaye zeziphi ekufuneka zisuswe kwimenyu.
Mema abantu osebenza nabo ukuba basebenzise i-waiterio ukuze ii-odolo kunye nemenyu zabiwe ngokuzenzekelayo.
Nawuphi na umshicileli
I-Waiterio ixhasa zonke iiprinta ezishisayo. Uninzi lwabantu abakhuphisana nabo baxhasa kuphela uhlobo olunye okanye ezimbini zokunyanzela ukuba uthenge izixhobo zexabiso.
I-Waiterio inceda ekufumaneni iintlawulo ezahlukileyo ezivela kubathengi ngokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokuhlawula.
Nasiphi na isixhobo
Ungayisebenzisa kwithebhulethi, kwi-smartphone, kwi-tv, kwiikhompyuter nakwikhompyuter. I-Waiterio isebenza kuzo zonke iinkqubo ezisebenzayo ezifana ne-Android, i-iOS, iWindows, iMacOS kunye neLinux.
Abathengi abonwabileyo 305
Iiakhawunti ezisebenzayo 4125
Zama le nkqubo yolawulo imangalisayo yesimahla. Unokongeza ukuya kwii-odolo ezili-100 ngenyanga ngelixa usebenzisa le software simahla. Uhlelo lokusebenza luyafumaneka nge-Android, i-iOS, iWindows, iMacOS kunye neLinux. Ungayisebenzisa le nkqubo yeNdawo yokuThengisa nakweyiphi na icwecwe, i-smartphone, i-tv, ilaptop kunye nekhompyuter.
Kuyakhawuleza kwaye kwaye kuya ngqo ukufaka nokuseta i-Waiterio POS kwindawo yakho yokutyela. Konke okudingayo ukuba uqalise yidilesi ye-imeyile kunye nesixhobo esine-intanethi.
Bathandwa abathengi bethu
Leapps inceda ikhefi yam ukuba ibaleke ngokufanelekileyo nangokutyibilikayo.
I-Waiterio iphucule inkqubo yam yoku-odola. Ixabiso elikhulu lemali.
Kulula kakhulu ukumisela kwaye kuphendulwa kakhulu. Nditsho nabapheki bendawo yokutyela bayathanda.
Zama i-app yasimahla. Unokongeza ukuya kuthi ga kwi-imeyile ezili-100 ngenyanga ngelixa ukusebenzisa usetyenziso simahla. Ungabhalisa kwezi zicwangciso zilandelayo ukuze uthathe ii-odolo ezininzi:
100 Imiyalelo Ngenyanga
300 Imiyalelo Ngenyanga
600 Imiyalelo Ngenyanga
1000 Imiyalelo Ngenyanga
1500 Imiyalelo Ngenyanga
∞ Imiyalelo Ngenyanga
Yise kudeumthetho wabucalaImmimiselo & nemiqathango